Miisaan lumis - Cmoapi
Haddii aysan dufan ku jirin mid ka mid ah cuntadaada, ama haddii aad seegto cunto, looma baahna inaad qaadatid qaddar ah liistada.
Immisa liiska ah ayaan qaataa maalin?
Orlistat waxaa sida caadiga ah la qaataa 3 jeer maalintii maalintii iyada oo cunno kasta oo muhiim ah ay ku jiraan xoogaa dufan ah (aan ka badnayn 30% kalooriyada cuntadaas). Waxaad dawada ku qaadan kartaa cuntadaada ama ilaa 1 saac kadib markaad wax cuntid.
Miyaad saxiqi kartaa dufanka markaad cunayso Orlistat?
Orlistat wuxuu joojiyaa shaqada lipase. Markaad daroogada ku qaadato cuntada, qiyaastii 25 boqolkiiba dufanka aad cunayso lama jabin oo waxaa lagu tirtiraa dhaqdhaqaaqa caloosha.
Liistadu ma leedahay waxyeellooyin?
Dhibaatooyinka soo noqnoqda ee sida caadiga ah loo soo sheego ee liiska waxaa ka mid ah: degdegga mindhicirka, dhaqdhaqaaqyo badan oo saxaro ah, daadgureyn saliid ah, dheecaan saliid malaw ah, steatorrhea, iyo gaaska oo leh dheecaan.
Miyaad qaadan kartaa 2 liiska hal mar?
Orlistat waxay shaqeysaa oo keliya marka ay dufan ku jiraan waxa aad cunayso, markaa haddii aad seegto cunto ama haddii aad cuntid cunto aan dufan lahayn markaa ha qaadan qadar ah liistada. Haddii aad ilowdo inaad qaadatid qiyaas, ha ka welwelin; kaliya qaado kaabsol cuntadaada xigta sidii caadiga ahayd. Ha qaadan laba qaadasho si wadajir ah si aad ugu kabatid qiyaasta aad illowday.
Keebaa wanaagsan liiska ama Xenical?
Farqiga u dhexeeya liiska ama Xenical ayaa ah in liistada ay tahay nooca guud ee daawada, halka Xenical la calaamadeeyay. Taasi waxay ka dhigan tahay in Xenical uu ka qaalisan yahay Orlistat oo si fiican loogu yaqaan kiniinka miisaanka oo yaraada. Xenical waa in loo qaadaa si la mid ah sida liiska.
Ma ku cabi kartaa liiska?
Orlistat lama falgalo khamriga, sidaas darteed waa ammaan in la cabo aalkolo inta aad qaadaneyso Orlistat. Si kastaba ha noqotee, aalkoladu waxay ku badan tahay kalooriyeyaasha. Sidaa awgeed, cabitaanka aalkolada intaad qaadaneyso Orlistat waxay caqabad ku noqon kartaa safarkaaga miisaankaaga oo yaraada. Wixii talo dheeraad ah oo ku saabsan sida loo sameeyo Orlistat waxtar badan u isticmaal cuntadeena Orlistat
Liistadu miyey saameyn ku leedahay bacriminta?
Kooxda liiska ku jirta, horumar la taaban karo ayaa lagu arkay astaanta dufanka dhammaadka 3 bilood. Heerarka rimidda waxay ahaayeen 40% iyo 16.7% iyo 3.3% liiska, kooxda metformin iyo kooxda xakamaynta siday u kala horreeyaan (P - 0.003). Miisaanka oo yaraada ayaa la ogaaday inuu yahay saadaaliyaha ugu wanaagsan ugxan sireed leh xasaasiyad leh dareen wanaagsan.
Ma qaadan karaa liiska ama hal mar maalintii?
Qiyaasta caadiga ah waa hal kaabsul - 120 mg, saddex jeer maalintii cunno kasta. Si kastaba ha noqotee, uma baahnid inaad mid qaadato haddii aysan dufan ku jirin cuntada ama haddii aad seegto cunto.
Alli waxaa lala xiriiriyay dhaawac daran oo beerka ah xaalado dhif ah, in kasta oo ay badanaa ku dhacday kuwa qaata daawada-xoogga (Xenical). Jooji qaadashada Alli isla markaana wac dhakhtarkaaga isla markiiba haddii aad isku aragto mid ka mid ah astaamahan suurtagalka ah ee dhaawaca beerka.
Liistada miyuu kiciyaa cadaadiska dhiigga?
Orlistat wuxuu kobciyaa miisaan lumis caafimaad oo macno leh oo la xidhiidha hoos u dhac weyn oo ku yimaada cadaadiska dhiigga iyo garaaca wadnaha, sidaas darteedna waxaa laga yaabaa inuu door ku yeesho maareynta dhiig karka bukaannada cayilan iyo kuwa buuran.
Liistada ma sababi kartaa dhibaatooyin kelyaha ah?
Orlistat waa ka-hortagga caloosha iyo qanjidhada 'pancreatic lipase' oo leh waxtarka la xaqiijiyay ee kordhinta iyo dayactirka miisaanka oo yaraada. In kasta oo isticmaalkiisa ay xaddiday dhibaatooyin laakiin dhibaato aan fiicnayn oo caloosha iyo mindhicirka, haddana dhawaanahan waxaa lala xiriirinayay dhaawaca kelyaha ee daran (AKI).
Liistada liistada ma la qabatimay?
Orlistat waa xannibaadda xiniinyaha loo yaqaan 'pancreatic lipase inhibitor' waxayna xanibtaa nuugista dufanka ee habka dheef-shiidka. Sababtoo ah ma saameynayso habka dhexe ee neerfaha, ama liiska ma lahaan karo waxyaabo la qabatimo.
Orlistat FDA ma la ansixiyay?
Xenical (orlistat 120mg) waxaa loo ansixiyay inay tahay wax soo saarka dawada ee FDA sanadkii 1999 maaraynta buurnida iyadoo lalaxiriira cunada kalooriga oo yaraatay, iyo in la yareeyo halista ah inuu miisaanka dib u helo miisaankaaga ka hor.
Sideed u qaadataa liiska 120 mg?
Qiyaasta caadiga ah ee Orlistat waa hal 120 mg oo kaabsal ah oo lagu qaato mid kasta oo ka mid ah saddexda cunno ee ugu waaweyn maalintii. Waa la qaadan karaa isla markiiba ka hor, inta lagu jiro cuntada ama ilaa hal saac cuntada ka dib. Kaabsoolka waa in lagu liqo biyo.
Liistada ma sababi kartaa korodh miisaan?
Badanaa miisaanka oo yaraada natiijada Orlistat waxay dhacdaa lixda bilood ee ugu horreysa qaadashada daawada. Haddii aad go'aansato inaad joojiso isticmaalka Orlistat miisaan lumis, waa inaad sii wadataa cunnada caafimaadka qabta iyo jimicsiga joogtada ah. Si kastaba ha noqotee, waxaad la kulmi kartaa xoogaa culeys ah tan kadib.
Sidee dhakhso leh ayaad miisaan ugu lumin kartaa liiska?
Orlistat (magaca magaca: alli) waa daawo OTC ah oo FDA-ansaxisay oo ka caawin kara dadka waaweyn ee miisaanka culus inay lumiyaan miisaanka. Orlistat waxay ku shaqeysaa iyadoo xayiraysa dufanka jirka oo la nuugo ka dib marka la cuno inta lagu jiro cuntada. Qiyaastii 5 ilaa 10 rodol ayaa laga yaabaa in la waayo 6-da bilood ee ugu horreeya isticmaalka liistada.
Intee in le'eg ayay ku qaadataa in alli uu shaqada ku bilaabo?
Sidee ugu dhakhsaha badan markaan qaadaa kaabsulka alli® waa inaan filaa inaan arko natiijooyin? Haddii aad raacdo kaloriin yar, cunto dufan yar, samee jimicsi jireed oo joogto ah, oo aad u qaadatid kaabsulka alli® sida lagu faray, waxaad arki lahayd natiijooyin labadii toddobaad ee ugu horreeyay. Badanaa miisaanka oo yaraada badanaa wuxuu dhacaa lixda bilood ee ugu horreysa.
Liistadu miyey xakamaysaa cuntada?
Orlistat (Xenical) waa daawo uu kuu qoro GP-gaagu. Waxaa loo sameeyay in lagu caawiyo miisaanka oo yaraada. Daraasaduhu waxay muujiyeen in iyadoo la adeegsanayo Orlistat, oo ay weheliso cunto caafimaad leh iyo jimicsi, ay kordhayaan miisaanka oo yaraada. Ma beddeleyso cuntada ama jimicsiga mana xakameynayo rabitaankaaga cuntada.
Liistada miyuu shaqeeyaa dhab ahaantii?
Daraasaduhu waxay muujiyeen in, celcelis ahaan, liis garayn, oo lagu daray cunto yareeya miisaanka iyo jimicsiga, ay sababaan culeys ka badan kan miisaanka yareeya iyo jimicsiga oo keliya. Dadka qaarkiis waxay lumiyaan 10% ama ka badan culeyskooda jirkooda lix bilood gudahood iyagoo kaashanaya liiska. Kuwa kale, waa waxtar yar.
Liistada ma sababi kartaa ganaca?
Gabagabo Warbixinadeenu waxay soo jeedinayaan ama liistada waxay kicin kartaa daroogada ay sababto ganaca daran ee bukaanka qaarkood. Bukaannada la soo dersa xanuunka caloosha waxyar ka dib markay bilaabaan orlistat, ogaanshaha cudurka beeryarada waa in la tixgeliyaa. Waxaan sidoo kale kugula talineynaa isticmaalka taxaddarka leh ee liistada bukaanada halista ugu jira dhaawaca ganaca.
Waa maxay waqtiga ugu fiican ee la qaato liiska?
Orlistat waxay u timaadaa sidii kaabsul iyo kaabsol aan qoro si afka loogu qaato. Waxaa badanaa la qaataa seddex jeer maalintii cunno kasta oo weyn oo dufan ku jiro. Qaado liistada inta lagu jiro cuntada ama illaa 1 saac cuntada ka dib. Haddii cuntada la seego ama aysan dufan lahayn, waad ka boodi kartaa qiyaastaada.
Immisa miisaan ayaad luminkaraysaa bil gudaheed haddii cayilku kaa buuxo?
Taas macnaheedu waa, celcelis ahaan, ujeeddadu tahay 4 illaa 8 rodol oo miisaan lumis ah bishii waa himilo caafimaad leh. Sababtoo ah waa suurtagal in wax badan la lumiyo, ugu yaraan bilaha hore ee cuntada, macnaheedu maahan inay caafimaad tahay ama in miisaanka uu sii jiri doono muddada dheer.
Maxay tahay sababta saxaro saliida liinku ay tahay marka la qaadanayo Orlistat?
Maaddaama saliiddu ka cufan tahay biyaha, dhaqdhaqaaqan mindhicirku wuxuu ka muuqan doonaa musqusha sida saliid liin ah oo fadhiya biyaha korkiisa. Dadka qaarkiis waxay ku tilmaami karaan urta keriorrhea inay tahay saliidda macdanta adag. Mararka qaarkood, qofku sidoo kale wuxuu mari karaa saxarada saliida agteeda.
Waa maxay Cetilistat
Cetilistat, oo sidoo kale loo yaqaan magacyada caanka ah Kilfat, Checkwt, Cetislim, Celistat waa daroogada miisaanka cusub ee lumisa.
Maxaynu ugu baahan nahay Cetilistat?
buurnida ayaa ah cudurka nafaqada ee ugu badan adduunka. Qof kastaa kuma ogaan karo natiijooyinka jimicsi iyo cunno nadiif ah; markaa waxaa laga yaabaa in loo baahdo in loo isticmaalo Cetilistat si loola dagaallamo buurnida.
Sidee ayey Cetilistat u shaqaysaa?
Cetilistat waxay ku shaqeysaa iyadoo laga horjoogsanayo burburka iyo nuugista dufanka. Waxay ku sameysaa tan iyada oo loo marayo ka hortagga sameynta lipase pancreatic oo shaqadeedu tahay inay jebiso triglycerides ee mindhicirada. Marka triglycerides aan loo qaadan karin sida asiidhka dufanka leh ee jirka, waxay marayaan qashin.Sidaas awgeed, waxaa yaraaday qaadashada tamarta taasoo keenta miisaanka oo yaraada.
Faa'iidooyinka Cetilistat iyo Miisaanka Maansada
1.Caawooyinka aad lumiso miisaanka waxay ilaalinaysaa qaab nololeed caafimaad leh, kaa caawinaya inaad ilaaliso BMI caafimaad qaba.
2.Wuxuu ku bixiyaa natiijooyin waqti gaaban, Cetilistat wuxuu ku siinayaa jirkaas bikininka ah laba iyo toban toddobaad gudahood.
Sida loo Isticmaalo Cetilistat
Badanaa, budada Cetilistat waxaa lagu iibiyaa qaab kaabsoollo 60mg ah oo afka laga qaato. Dadka qaarkiis waxay doorbidi doonaan inay qaataan waqtiga cuntada kadib, laakiin waa inaadan waligaa ka badnaan saacad dhajinta waqtiga cuntada.
Cetilistat Ma Runbaa Shaqaysaa?
Cetilistat sidoo kale waa daawo muddo gaaban ah mana noqon karto tan ugu fiican ee lagu xakameeyo miisaanka inta ka dhiman noloshaada. Haddii ay dhacdo in la isticmaalo muddo aad u dheer, waxay u horseedi kartaa balwad iyo sidoo kale arrimaha caloosha.
Si kastaba ha noqotee, Cetilistat waxaa loo arkaa in loo dulqaadan karo si ka fiican marka loo eego daawooyinka kale ee miisaanka lumiya sida Orlistat.
Ayaa Isticmaala Cetilistat?
BMI-gaagu wuxuu ka badan yahay 27, oo waxaad la il-daran tahay dhibaato caafimaad la xariirta buurnida sida dhiig karka iyo sokorowga.
Inta badan dhibaatooyinka soo raaca Cetilistat waa calool xanuun iyo dheef shiidka.
Yaraynta fiitamiin E iyo D heerarka, saxarada oo saxaroota, Degdega wasakhda, Soosaarida malawadka st Saxarada dufanka badan st Saxarada saliida leh ect.
Maxaa Dhacaya Haddii Qiyaasta Maqnaanshaha Cetilistat?
Haddii aad seegtay qaddarka, waxaa jira laba shay oo ay tahay inaad tixgeliso; sidaad u daaho iyo marka jadwalkaaga xiga uu yahay. Haddii ay dhacdo inaad xusuusato inaad hadda uun seegtay qiyaasta daawo, qaado isla marka aad aragto.
Haddii jadwalkaaga xiga uu aad ugu dhow yahay, ka bood qiyaasta Cetilistat ee aad seegtay oo dib u bilow jadwalkaaga qaadashada joogtada ah. Weligaa ha u isticmaalin qiyaasta dheeriga ah si aad ugu sameyso qiyaasta la seegay, maxaa yeelay tani waxay kaliya kuu horseedi doontaa xad dhaaf. Haddii aad dareento inaad xasuusato goorta aad qaadaneyso dawooyinkaaga ayaa noqoneysa hawl, waxaad mar walba diyaarin kartaa qaylo-dhaanta ama waxaad weydiisan kartaa mid ka mid ah asxaabtaada ama xubnaha qoyskaaga inay ku xasuusiyaan.
maxay ku kala duwan yihiin cetilistat iyo orlistat？
daaweynta liistada ayaa sidoo kale lala xiriiriyaa dhowr dhacdo oo caloosha ku dhaca oo xun (AEs) kuwaas oo uga sii daray bukaannada aan u hoggaansamin cuntada dufanka yar ee lagula taliyay. Cetilistat waa ka-hortagga qanjirada iyo qanjidhada caloosha iyo caloosha, waana kiimiko ahaan ka duwan liiska.